Fanenjehana olon-dratsy :: Nirefodrefotra ny basy tamin’ ny fisamborana lehilahy dimy • AoRaha
Fanenjehana olon-dratsy Nirefodrefotra ny basy tamin’ ny fisamborana lehilahy dimy
Nanakoako ny feom-basy, teny Sabotsy Namehana, omaly antoandro, tamin’ny fanenjehana andian’olona ahiahiana ho jiolahy. Voasambotry ny polisy ny lehilahy dimy. Tafaporitsaka ny sasany.
Poa-basy intelo nataon’ireo mpitandro filaminana no heno nirefodrefotra teny an-toerana. Tsy nisy ny olona naratra na maty voatifitra tamin’izany.
Taitra ny mponina nahita ny andiana polisy nanenjika sy nisambotra lehilahy maromaro tany anaty tanàna. Fantatra fa nanao hetsika manokana hahatrarana an’ireo lehilahy voatondro ho olon-dratsy ireo ny mpitandro filaminana, izay niarahan’ny polisy avy amin’ny Kaomisaria eny an-toerana sy ny avy amin’ny Borigady misahana ny heloka bevava (BC). Voasoroka ny asa ratsy noho ny fiaraha-miasa teo amin’ireo ekipa roa ireo.
“Nisy vaovao heno momba ireo olona manomana hanao fanafihana. Efa nisy ny fanaraha-maso natao. Saika nandroba fivarotana sy toerana fikirakirana vola amin’ny finday ireo lehilahy maromaro. Tsy tanteraka izany. Voatery nanapoahana basy ny fampitandremana an’ireo olona nenjehina”, hoy ny polisy.
Nahatrarana basy poleta tsy nisy bala sy fitaovana hafa teny amin’ireto dimy lahy voasambotra. Fantatra fa olona tsy mipetraka eny Sabotsy Namehana izy ireo. Mbola nitohy ny fifanenjehana sy ny hetsika nataon’ny polisy teny amin’iny faritra Avaradrano iny, hatramin’ny omaly hariva.
Fanafihana teny Itaosy :: Voatazon’ny zandary ireo telo vavy tao amin’ny fivarotana voaroba
Fifohana sy fivarotana rongony :: Olona roa ambin’ny folo noraofin’ny polisy